Wonke umuntu uyazi ukuthi akukho isipho sihle futhi eyigugu engaphezu kweyodwa ukuthi lwenziwe bebodwa, usebenzisa zonke izinto ajwayelekile. Ngokwesibonelo, lesi sihloko kungaba cute unodoli wenziwe ngendwangu noma pantyhose. onodoli Homemade zihlukile ethandwa eside ezinemilenze imodeli Barbie charm esiyingqayizivele lanamuhla kanye wedwa. Ngemva ngamunye ithoyizi ezifana - wobuciko ngempela, okuyinto has siqu ngabanye "uhlamvu" kwalo nangokuthi ophayo umoya ekhaya imfudumalo nenduduzo.
Zikhona amathiphu amaningi namasu indlela yokwenza unodoli ngezandla zakhe. Empeleni, ukufunda ubuchwepheshe yokukhiqiza amandla kwanoma yimuphi umuntu onentshisekelo, kungakhathaliseki nochwepheshe abanolwazi noma yezandla amateur. Kulula ukusizakala nenqwaba imibono ngesibindi umcabango yokudala ukuzulazula, ngoba umsebenzi ingasetshenziswa ezihlukahlukene impahla, isibonelo, wasebenzisa inayiloni amasokisi amade noma amasokisi, ezilahliwe indwangu noma izingubo ezindala. Ngaphambi thunga doll, udinga ukwazi ukuthi kunezinhlobo ezimbili amathoyizi ezinjalo - unodoli lufrenyiwe nevolumu frameless. Indlela elula inketho kuqala. Okokuqala, ukusika amakhadibhodi amathoyizi zonke izakhi ezidingekayo bese hooped nge pantyhose beige kanye inayiloni intambo enamathiselwe ngemuva doll. Manje impela yaseZimbabwe ambalwa izimpumputhe tie zonke izingcezu ndawonye. Izinkinobho Kufanele zimi kahle zilungele indima iso, uvolo izindikimba - inhloko obukhulu izinwele, futhi umlomo nekhala umane ukudweba umaka. ingubo enhle umphelelisi ukubukeka eziyingqayizivele doll esiphelele. I ethile kuphela ukuthi obuyisile indiza ithoyizi, kodwa ungakwazi ibe isikhumbuzo esikhulu, elenga uzibuthe pre-unamathisele.
Manje ake sixoxe indlela yokwenza unodoli ehlukile aluhlaza ngaphezulu formami.Obemnaya ithoyizi frameless ligcwele ukotini noma zokwenziwa ukupheda izingxenye athungwe ahlanganiswa ngemva zokunyathelisa. Ngendlela efanayo, njengoba kuchaziwe ngenhla, wenza izinwele, ubuso, futhi bathole izingubo ezifanelekayo.
Kubukeka okufushane ezinhle, zenziwe njengoba luhlaka wire. Indlela yokwenza unodoli, kuchazwa ngokuningiliziwe ngezansi. Okokuqala, thatha rigidity ezinhle bentambo, okuvumela ithoyizi akuyona nje ukuze ngizigcine ngiwumqemane, kodwa futhi wasithatha ukunyakaza kwezandla nezinyawo uma bebona kunesidingo yakho. Wire kuyadingeka ukuze ukhiqize Uhlaka indoda. Okwesibili, ukulungele ngokugcwele mpahla ifreyimu ukotini, camera kahle ingcina. Okwesithathu, tights wenza lwazo zonke izinto ezidingekayo futhi unamathisele ukuba uzimele. Ngesikhathi esigabeni sokugcina ebusweni basondela, kwekhanda usuwakhiwe akhethiwe ezifanele unodoli ingubo.
Ukwazi nokusebenzisa lezi zimiso elula, kulula ukufunda indlela thunga unodoli wenziwe ngendwangu ngezandla zakhe. Creative indlela kubhizinisi, iconsi isineke imiyalelo elandelayo kuyoba usizo ukudala umsebenzi kweqiniso yobuciko ukuthi uzokunika imfudumalo injabulo futhi uyojabulisa obathandayo. Ngesikhathi esifanayo, doll, owabekwa ngezandla zakhe, hhayi wathenga esitolo, ubukeka kangcono kakhulu eshalofini iKhabhinethi noma edeskini.
Ukuthenga - akusona isifo, uma uyazazi.
"Amandla Slim": ukubuyekezwa. Amandla Slim neminye
Izikhangibavakashi Lipetsk. Incazelo ezikhangayo futhi Lipetsk esifundeni